छोटकरीमा : विदेशमा कार्तिक महिना-२०७७
कार्तिक महिनाभर अमेरिकी चुनाव वैश्विक चासोको विषय रह्यो । विहार निर्वाचन, फ्रान्स आक्रमण, टर्कीमा भूकम्प, फिलिपिन्समा आँधी, न्युजिल्याण्डको मन्त्रीमण्डल विस्तार, म्यानम्यारको आमनिर्वाचन, कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपमा नयाँ सफलता लगायतका विषयवस्तुहरू महिनाभर चर्चामा रहे । यसका साथै अन्य विषयवस्तुहरूबारे स्मपूर्ण जानकारी यहाँ पढ्नुहोस् ।
अष्ट्रेलियाको दोस्रो ठूलो सहर मेलबर्नमा कोरोना महामारीका कारण गरिएको लकडाउन एक सय ११ दिनपछि बुधबार अन्त्य भएको छ ।
यो लकडाउन अन्य ठाउँमा लगाइएकोभन्दा लामो भएको अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
अष्ट्रेलियाको मेलबर्नमा साढे तीन महिनापछि लकडाउन अन्त्य
गलादेशमा दशौँ हजार मुलसमान फ्रान्सेली सामानको बहिष्कारको समर्थनमा सडकमा उत्रेका छन्।
फ्रान्सको शार्ली शाब्दो पत्रिकाले मुसलमान धर्मका प्रवर्द्धक मोहम्मद पैगम्बरको कार्टुन छापेको विषयलाई फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुअल म्याक्रोले समर्थन गरेपछि मुलसमान बहुल राष्ट्रले त्यसको विरोध गरेका हुन्।
भारतको बिहारमा विधानसभाका लागि बुधबार पहिलो चरणको निर्वाचन भइरहेको छ । बिहारमा तीन चरणमा चुनाव हुँदैछ । पहिलो चरणमा ७१ पदका लागि एक हजार ६६ जना उम्मेदवार चुनावी मैदानमा रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । ती मध्ये ९५२ जना पुरुष र १५५ जना महिला रहेका छन् ।
लामो समयको प्रतिक्षापछि टिभी सिरिज ‘मिर्जापुर २’ हालै ओटीटी प्लेटफर्ममा रिलिज भएको छ । रिलिज पश्चात नै सामाजिक सञ्‍जालदेखि सञ्‍चारमाध्यमसम्म चर्चा भइरहेको छ । यसैबीच यसको एक सिनलाई लिएर निर्माता टिम विरुद्ध प्रतिलिपि अधिकार ऐन उल्लंघन गरेको आरोप लागेको छ ।
‘मिर्जापुर २’ निर्माण टिमप्रति प्रतिलिपि अधिकार ऐन उल्लंघनको आरोप
अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि डेमोक्रेट उमेदवार जो बाइडेन राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएमा भविष्यमा चिनियाँ सामग्रीमा लगाइने करका विषयमा मुख्य सहयोगी राष्ट्रहरुसँग तत्काल परामर्श गर्ने उनका वरिष्ठ सल्लाहकारले बताएका छन् । चीनविरुद्ध आफूलाई बलियोरुपमा स्थापित गर्न 'सामूहिक लाभ' का बारेमा मुख्य सहयोगी राष्ट्रहरुसँग परामर्श गर्ने सल्लाहरकारले बताएका हुन्छ ।
'बाइडेन निर्वाचित भएमा चिनियाँ सामग्रीको लगाइएको करको विषयमा सहयोगी राष्ट्रहरुसँग परामर्श गर्ने'
फोटोहरू राख्न मिल्ने सामाजिक सञ्जाल इन्स्टाग्राममा अबदेखि चार घन्टासम्म लाइभ गर्न मिल्ने भएको छ ।
यसअघि एक घन्टा मात्रै लाइभ गर्न मिल्ने व्यवस्था रहँदै आएकामा अबदेखि चार घन्टासम्म लाइभ गर्न मिल्ने व्यवस्था गर्न लागिएको सो कम्पनीले घोषणा गरेको छ ।
इन्स्टाग्राममा चार घन्टा लाइभ गर्न मिल्ने सुविधा थपिँदै
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका जेठो छोराले कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट हुने मृत्यु 'लगभग केही पनि नभएको' बताएका छन् ।
उनले बिहीबार फक्स न्युजसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । संयुक्त राज्य अमेरिकाभर बिहीबार एकैदिन एक हजार ४९ कोरोना संक्रमितको मृत्यु भउको कोभिड ट्र्याकिङ प्रोजेक्टले जनाएको छ ।
डोनाल्ड ट्रम्प जुनियरले भने - कोभिडबाट हुने मृत्यु 'लगभग केही पनि होइन'
टर्कीमा शुक्रबार गएको शक्तिशाली भूकम्पबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या ४२ पुगेको छ । भूकम्पका कारण टर्कीमा कम्तीमा ४२ जनाको मृत्यु भएको यहाँका अधिकारीहरूले जनाएका छन् । भूकम्पको धक्का छिमेकी देशहरूमा समेत महसुस भएको उल्लेख छ ।
फिलिपिन्समा यस वर्षकै सबैभन्दा शक्तिशाली आँधी आएको छ । २२५ किलोमिटर प्रतिघण्टाको गतिमा आएको 'टाइफुन गोनी'ले भयानक आँधी र अत्यधिक वर्षा गराएको छ।
हालसम्म चारजनाको मृत्यु भइसकेको सूचना प्राप्त भएको बीबीसीले जनाएको छ । घरहरु भत्किएका छन् भने सडकहरुमा बाढी पसेको छ ।
फिलिपिन्समा वर्षकै सबैभन्दा शक्तिशाली आँधि
क्यानडाको क्युबेक सहरमा एक तरबारधारीले आक्रमण गर्दा दुई जनाको मृत्यु भएको छ । मध्यकालीन लुगा लगाएका ती व्यक्तिको आक्रमणमा अन्य पाँचजना घाइते भएको प्रहारीले जानकारी दिएको छ ।
उक्त घटनाको केही समयपछि ती व्यक्तिलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । ती व्यक्ति २० वर्षका रहेको पाइएको छ ।
क्यानडामा एक तरबारधारीले आक्रमण गर्दा दुईजनाको मृत्यु
फ्रान्सको सहर लियोमा गोली चल्दा एक ग्रिक अर्थोडक्स पादरी सख्त घाइते भएका छन् । गोली प्रहारपछि आक्रमणकारी घटनास्थलबाट फरार भएको त्यहाँका अधिकारीहरुले जनाएका छन् । यद्यपि त्यहाँको प्रहरीले घटनामा संलग्‍न रहेको आशंकामा एकजनालाई भने पक्राउ गरी हिरासतमा राखेको बीबीसीले समाचारमा जनाएको छ ।
फ्रान्समा पुन: हमला, गोली चल्दा चर्चका पादरी घाइते
सरदार बल्लभभाइ पटेलको १४५औं जयन्तीका अवसरमा गुजरातको केवडियामा भव्य कार्यक्रमको आयोजना भएको थियो।
कार्यक्रममा भारतीय प्रधानमन्‍त्री नरेन्द्र मोदी पनि सहभागी रहे । कार्यक्रममा सहभागी हुनुअघि प्रधानमन्‍त्री मोदीले स्ट्याचु अफ युनिटीमा पुगेर पुष्पाञ्‍जली अर्पण गरेका थिए ।
झाँकी र परेडले केवडिया झुम्यो, सरदार पटेललाई भारतले यसरी सम्झियो ! (फोटो फिचर)
फ्रान्स र अस्ट्रियामा आतंककारी हमला बढेपछि युरोपेली मुलुकहरुले आफ्नो सीमा कडा पार्दै लगेका छन् । फ्रान्सको राजधानी पेरिसको काँठ क्षेत्रका एक शिक्षकको हत्या गरेलगत्तै फ्रान्समा लगातार आतंककारी हमला हुन थालेको हो ।
बम्बई हाई कोर्टले टीभी एंकर अर्नब गोस्वामीलाई जमानत दिन अस्वीकार गरेको छ ।
उच्‍च अदालतद्वारा अर्नबलाई जमानत दिन अस्वीकार
अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावको मत परिणाम आइसकेको छ । अमेरिकी जनताले जो बाइडनलाई आफ्नो राष्ट्रपति चुनिसकेका छन् । डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपतिमा दोहोरिन सकेनन् । यो उनको चुनावी हारमात्रै नभएर आगामी दिनमा अनेक कठिनाइ भोग्नुपर्ने देखिएको छ ।
विज्ञहरुकाअनुसार उनको कार्यकालमा भएका कथित घोटालहरुको जाँचबाट राष्ट्रपति पदबाट हटेपछि आपराधिक कारबाहीका साथै अप्ठ्यारो वित्तीय स्थितिको पनि सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।
राष्ट्रपति पदबाट हटेपछि के ट्रम्प जेल जान सक्छन् ?
अमेरिकी राष्ट्रपतिमा डेमोक्रेटिक पार्टीका जो बाइडेनको जितले विश्वको विभिन्न क्षेत्रमा तरंग ल्याएको छ । विशेषतः बाइडेनको जितपछि एसियन सेयर मार्केटमा धेरै प्रभाव परेको देखिन्छ । जापानमा सोमबार सेयर मार्केट खुल्दा पहिलो सत्रको ट्रेडिङमा निक्केइ २२५ बिन्दुमा पुगेको जापानिज समाचार एजेन्सी क्युडोले जनाएको छ ।
बाइडेनको जितपछि एसियन सेयर बजारमा उछाल : जापानी सेयर बजार २९ वर्षयताकै उच्च बिन्दुमा
पूरै विश्व अमेरिकी चुनावको अन्तिम नतिजा पर्खिरहेका बेला ट्रम्प भने गल्फ खेल्नमा व्यस्त थिए । गल्फकै लागि विशेष पहिरनमा शनिबार उनी भर्जिनियास्थित आफ्नै कोर्समा गल्फ खेल्न पुगेका हुन् र उनको हारबारे आधिकारिक घोषणा हुँदा पनि उनी मैदानमै रहेको अमेरिकी सञ्चार माध्यमहरुले जनाएका छन् ।
कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड १९ विरुद्धको खोपमा नयाँ सफलता हात परेको उत्पादनकर्ताहरुले दाबी गरेका छन् । एक प्रारम्भिक विश्लेषणका अनुसार फाइजर र बायोएनटेकले उत्पादन गरेको खोपले परीक्षणमा ९० प्रतिशत सम्मको प्रभावकारिता देखाएको हो।
हराइनका प्रधानमन्त्री सेख खलिफा बिन सलमान अल खलिफाको निधन भएको छ । उपचारका क्रममा अमेरिकामा उनको निधन भएको हो ।
दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति मुन जाए–इन र अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचित जो बाइडेनबीच बिहीबार टेलिफोन वार्ता भएको छ । दक्षिण कोरियाको राष्ट्रपति कार्यालय चियोङ वा डाइका अनुसार वार्ता करिब १४ मिनेट लामो थियो ।
रुसले उत्पादन गरेको कोभिड–१९ विरुद्धको खोप स्पुतनिक–५ खोप ९२ प्रतिशत प्रभावकारी भएको दाबी गरेको छ । अमेरिकी कम्पनी फाइजरले आफूले उत्पादन गरेको भ्याक्सिन ९० प्रतिशत प्रभावकारी भएको बताएको दुई दिनमै रुसले उक्त खोपबारे विवरण सार्वजनिक गरेको हो । रुसले गत अगस्टमै स्पुतनिक खोपलाई स्वीकृति दिएको थियो ।
छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोना संक्रमित बढ्दै गर्दा खुसीको खबर सार्वजनिक भएको छ ।
सिरम इन्स्टिट्यूट अफ इन्डिया (एसआईआई)ले बिहीबार अक्सफोर्ड र एस्ट्राजेनिकाको कोरोना भ्याक्सिन कोभिशिल्डका चार करोड डोज तयार गरिएको जनाएको छ ।
कोरोना भ्याक्सिन कोभिशिल्डका चार करोड डोज तयार
म्यान्मारमा हालै सम्पन्न आमनिर्वाचनप्रति सेना समर्थित पार्टीले असहमति जनाएको छ । सेनाको समर्थन रहेको विपक्षी दल युनियन सोलिडारिटी एन्ड डेभलपमेन्ट पार्टी (यूएसडीपी) ले निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्दै परिणामप्रति असहमति जनाएको हो ।
म्यान्मारको विपक्षी दलद्वारा मतपरिणाम अस्वीकार
चीनले अमेरिकी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित जो बाइडेनलाई बधाई दिएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित जो बाइडेनलाई चीनले ढिला गरी शुक्रबार बधाई दिएको हो।
जो बाइडेनलाई चीनको बधाई !
पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामाले वरिष्ठ अमेरिकी रिपब्लिकनहरुले नै चुनावमा धाँधली भएको भन्ने ट्रम्पको आधारहीन दाबीलाई समर्थन गर्नुले देशको प्रजातान्त्रिक प्रणालीलाई कमजोर तुल्याएको गुनासो गरेका छन् ।
सीबीएस न्युजसँगको अन्‍तर्वार्तामा उनले राष्ट्रपति निर्वाचनमा डेमोक्रेटिक उमेदवार जो बाइडेनले स्पष्ट जित हासिल गरेको पनि बताएका हुन् ।
ट्रम्पलाई हार्न मन पर्दैन त्यसैले चुनावबारे गलत आरोप लगाइरहेकाछन् : ओबामा
काबुलकाे बम विस्फोटमा एकहप्ताअघि एक पत्रकारले ज्यान गुमाए । बिहीबार फेरि अफगानिस्तानकाे दक्षिणी हेल्मन्ड प्रान्तमा भएकाे बम विस्फोटबाट अर्का एक रेडियो पत्रकारको ज्यान गएको छ ।
इजिप्टको शान्ति सम्झौताको अनुगमनमा खटिएको अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति सैनिक सवार एउटा हेलिकोप्टर बिहीबार साँझ दुर्घटनाग्रस्त हुँदा सात सैनिकको मृत्यु भएको छ ।
इजिप्टको सिनाई प्रायद्वीप क्षेत्रमा नियमित उडान भरिरहेको हेलिकाेप्टर दुर्घटना भएको हो ।
इजिप्टमा सैनिक हेलिकोप्टर दुर्घटना, सात सैनिकको मृत्यु